एक राम्रो फुटरेस्ट छनौट गर्नुहोस् र आराम प्राप्त गर्नुहोस् बेजिया
मारिया vazquez | 19/07/2021 20:00 | फर्नीचर
फुटरेस्ट एक अप्रयुक्त टुक्रा हो जुन, जे होस्, हाम्रो भलाईको लागि योगदान गर्दछ, हाम्रो सान्त्वना को लागी। हामी जो घरबाट काम गर्दछौं उनीहरूले कम्प्युटरमा काम गर्दा हाम्रो आसन सुधार गर्न प्रयोग गर्दछन्। तर हामी यी आजका कुराहरु हुनेछैनौं जुन हामी आज कुरा गर्नेछौं, तर ती जो हाम्रो खुट्टा आराम गर्न मद्दत गर्छन् हामी आफ्नो सुत्ने कोठामा वा बैठक कोठामा आराम गर्दा।
यो पदचिह्न एक बन्छ आराम को क्षणहरूमा ठूलो सहयोगी। उचित रूपमा प्रयोग गरिएको, यसले हामीलाई हाम्रो खुट्टा आराम गर्न र हाम्रो सर्कुलेशनलाई बढावा दिन मद्दत गर्दछ। यद्यपि समस्याहरू जोगिन उपयुक्त उचाई र गैर-स्लिप भएको एक छनौट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ
यदि मैले कहिले पनि फुटस्टेसन प्रयोग गरेको छैन, किन अब यसलाई? तपाईं सोचिरहनुभएको हुन सक्छ। त्यहाँ मानिसहरू छन् जसको लागि एक फुटस्टेस्ट फाइदाजनक हुन सक्छ; व्यक्ति जो एक विशिष्ट चोट पुगेको छ, भेरिकोज शिरा वा सर्कुलेशन समस्याहरु छन्। तर तपाईलाई चाहानाको लागि कुनै बहाना आवश्यक पर्दैन उग्रताको लागि आराम प्रदान गर्नुहोस्। कसले केहि समय को लागी आफ्नो खुट्टा फैलाउन मन पराउँदैन ...
के तपाइँ टेलिभिजनमा चलचित्रको आनन्द लिनुहुन्छ?
के तपाईं आफ्नो मनपर्ने पुस्तक पढ्नुहुन्छ?
वा तपाइँ घर पुग्दा केवल १० मिनेट आराम गर्न बस्नुहुन्छ?
1 कसरी फुटरेस्ट छनौट गर्ने
कसरी फुटरेस्ट छनौट गर्ने
यदि तपाईं धेरै शर्तहरू पूरा गर्दैनन् भने फुटेर्सले तपाईंलाई थाकेका खुट्टाहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्दैन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, कुनै श doubt्का बिना, आफ्नो उचाई को ख्याल राख्नुहोस् ताकि हामी खुट्टा को स्थिति गठन गर्न छैन। यो कहिल्यै सोफा भन्दा अग्लो हुनु हुँदैन, कहिले पनि होइन!
हामीले पनि माग गर्नुपर्छ राम्रोसँग कुशन वा नरम समर्थन। विशेष गरी महत्त्वपूर्ण यो प्याडिंगको आनन्द लिनु हो जहाँ हाम्रो घुँडा र हाम्रो हिलले समर्थन गर्दछ। थप रूपमा, यदि फुटरेस्टसँग निश्चित झुकाव छ, जस्तै Ikea बाट ओम्टोन्क्सम र पोआंग मोडेलहरू, यसले हामीलाई सर्कुलेशन प्रवर्धन गर्न मद्दत गर्दछ।
सोफा र फुटरेस्टको संयोजनले संयम र भव्यता ल्याउँछ हाम्रो बैठक कोठामा। दुबै गुणहरू जुन हामी सोफा र फुटरेस्टको सेट छनौट गरेर सफाई रेखा र नरम रंगहरूको साथ छनौंट गर्न सक्छौं जुन हालको सजावट प्रवृत्तिको प्रतिक्रिया दिन्छ: स्कान्डिनेभियन शैली।
यदि, अर्कोतर्फ, हामी खाली स्थानको लापरवाह र / वा रमाईलो प्रकृति हाइलाइट गर्न चाहन्छौं, टुक्रा छनौट गर्नुहोस् जुन तिनीहरूको डिजाइन र / वा रंगद्वारा भिन्न छ हामीलाई यो प्राप्त गर्न सहयोग गर्न सक्छ। यसले हामीलाई थोरै डर प्रदान गर्दछ, तर के कुञ्जीहरूको साथ हामी सन्तुलित सेट प्राप्त गर्न सक्दछौं:
पछिल्लोलाई महत्व दिन तटस्थ टोन र रंगीन फुटरेस्टमा सोफा छनौट गर्नुहोस्।
एक तटस्थ फुटरेस्ट छनौट गर्नुहोस् र यसलाई यसको डिजाइन वा बनावटको साथ बाहिर खडा गर्नुहोस्।
हामी दुबै फूटरेस र puffs बजार मा पाउन सक्छौं कि समान सामग्री को रूप मा उपयोगी हुन सक्छ, विभिन्न सामग्री मा। सबैभन्दा लोकप्रिय ती क्लासिक प्याडेड मोडेलहरू हुन् जुन भित्र आउँदछ कपडा, छाला वा नक्कल छाला। यो यस्तो प्रकारको फुटस्टेसमा छ जुन हामी पाउँछौं, प्राय जसो ती एर्गोनोमिक र / वा झुकाव डिजाइनहरू जसले यसको आराममा यति धेरै योगदान पुर्‍याउँछन्।
थप रूपमा, यो फेला पार्न बढि सामान्य छ poufs वा fufs का कपडा, crochet वा raffia एउटा ट्रिपल उद्देश्यको साथ लाउन्जहरूमा: हाम्रा खुट्टाहरूलाई विश्राम दिन, हाम्रा पाहुनाहरूलाई अझ एक सीट प्रदान गर्न र हामी पढिरहेको पत्रिका वा हामीले तयार गरिरहेको पेय पदार्थ छोड्न सहयोगी टेबलको रूपमा सेवा गर्ने। सबै तीन उद्देश्यहरू पूरा गर्न, pouf संरचित हुनुपर्दछ, जुन सत्यको क्षणमा फुटरेस्टको रूपमा यसको क्षमतामा सम्झौता गर्न सक्दछ।
यसको सौंदर्य र आरामलाई प्रभाव पार्नुको साथ सामग्री यी पछाडिको व्यावहारिकतालाई पनि प्रभाव पार्दछ। र यो यो हो कि तिनीहरूलाई पहिलो दिनको रूपमा राख्नको लागि, केहीलाई अरूहरू भन्दा बढि हेरचाह आवश्यक पर्दछ। न त सफा गर्न सजिलो यो रत्न डिजाइनमा उस्तै हुनेछ जुन यो कपडाको रूपमा छ।
फुटरेस्ट छनौट गर्नु अघि यो सल्लाह दिइन्छ आफैलाई प्रश्नहरूको श्रृंखला सोध्नुहोस् हाम्रो छनौट सहि पाउन। तपाइँ कसरी सोध्नुहुन्छ: जहाँ म फुटेस्ट राख्छु? यसलाई कसले प्रयोग गर्ने छ? यो के को लागी प्रयोग हुन गइरहेको छ? के मलाई एक भन्दा बढि कार्य पूरा गर्न यो आवश्यक छ? के यो मेरो रखरखाव र सफाई सजिलो छ को लागी महत्वपूर्ण छ? तिनीहरू सबैलाई उत्तर दिनुहोस् जुन फुट्रस्टको खरीदमा अधिक सावधानीपूर्वक पैसा लगानी गर्न मद्दत गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » सजावट » फर्नीचर » एक राम्रो फुटरेस्ट छनौट गर्नुहोस् र आराम प्राप्त गर्नुहोस्